Ividiyo: Social vs. Search Smackdown | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 10, 2013 NgoLwesibili, Septhemba 10, 2013 Douglas Karr
Ngiyacabanga Ukukhangisa kwe-MDG bezama ukwenza abanye bethu baphonse i-gasket lapho sifunda isihloko sale vidiyo ye-infographic ababeyihlanganisa, I-Social vs Search Smackdown: I-Battle of Internet Marketing Titans. Kepha, maye, babuyela ezingqondweni zabo ngokuphela kwevidiyo.
Lapho siqala i-ejensi yethu, imboni yayigcwele izinhlaka ezikhethekile. Eqinisweni, iseluleko sokuqala engisitholile kumnikazi we-ejensi bekuwukukhethekile. Lokho bekuphikisana ngqo nesizathu ngqo sokuthi kungani ngiqale Highbridge - kungenxa yokuthi wonke umuntu wayelwa nesabelomali somunye futhi akekho owayebheke iklayenti. I-CMO enikeziwe ibifaka izingcingo ezivela kubathengisi be-imeyili, abathengisi be-SEO, abathengisi beSocial Media… ingasaphathwa eyabathengisi bendabuko bezentengiso. Futhi bonke baletha izibalo etafuleni ukusekela ukuthi kungani kufanele uchithe imali eningi nabo.
Amasu wokumaketha edijithali asebenza kahle kakhulu awekho Ukuqhathanisa, bonke kufanele basebenze ndawonye. Abamukeli be-imeyili ababuyayo futhi bahlanganyele emphakathini, imithombo yezokuxhumana yakha ingxoxo online ekhiqiza izingcaphuno nama-backlinks, nawo enza ngcono isikhundla sakho. Ngemuva kwalokho isikhundla sakho ngamagama asemqoka afanele afika phambi kwabantu abacwaninga futhi abalungele ukuthenga. Umbuzo akuyona ukuthi iyiphi okufanele uyisebenzise, ​​kepha kufanele uyihlole futhi uyisebenzise kanjani ngayinye.
Ucishe wangitholela i-MDG! Umsebenzi omuhle.
Tags: mdgmdg ukukhangisamdgokubeSesha Marketingsesha kuqhathaniswa nomphakathiukumaketha komphakathiSocial Media Marketing
Sep 11, 2013 ku-4: 30 AM
Njenge-SEO mbumbulu / i-SEM yenkampani yokuqalwa kwe-boutique, bengingafuna ukukusebenzisa kokubili. I-Social and Search ihlanganisa, ngakho-ke ngiyavuma ukuthi kufanele zihambisane nokwenza isu elihle lokukhangisa lokusesha.